Dowladda Qatar oo War kasoo saartay Qaraxii ka dhacay meel ku dhow Xarunta Madaxtooyada | Weheliye Online
Dowladda Qatar oo War kasoo saartay Qaraxii ka dhacay meel ku dhow Xarunta Madaxtooyada
Dowladda Qatar ayaa si adag u cambaareysay qaraxii Is-miidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay Barta koontarool ee laga ilaaliyo Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ee ku taalla Isgoyska Ceelgaabta ee Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibbada dalka Qatar ayaa waxaa lagu sheegay inay ka xun yihiin qaraxii ka dhacay Muqdisho, iyagoona tacsi u diray qoysaska dadkii ku geeriyooday qaraxaas, iyagoona Caafimaad u rajeeyay dadkii ku dhaawacmay.
Sidoo kale Dowladda Qatar ayaa mar kale ku celisay mowqifkeeda adag ee ay ku diidday rabshadaha iyo falalka wax loogu yeero Argagixisada ee ka dhaca dalka Soomaaliya, iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin dowladda.
Ugu yaraan 8 ruux oo isugu jiray Askar iyo dad shacab ah ayaa ku geeriyooday, halka 9 kalena waxaa ay ku dhaawacmeen qaraxii Is-miidaaminta ahaa ee ka dhacay Isgoyska Ceelgaabta ee degmada Xamarjajab, sida uu warbaahinta u sheegay Afhayeenka Ciidanka Booliska dowladda.
Previous articleWARBIXIN: Itoobiya oo baahisay Xog sir ah oo ay lahayd TPLF, Soomaaliya saameyn fog ku leh!!
Next articleMidowga Musharaxiinta oo sheegay in MW Farmaajo iyo Taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin ay maleegayaan shirqool iyo qalqal amni.